IXiaomi Black Shark 2 Pro ihamba ngezandla ze-AnTuTu | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Sineentsuku ezintlanu kuphela ukusuka kumiliselo olusemthethweni lwe- Xiaomi Black Shark 2 Pro, I-smartphone elandelayo yokubetha kwimarike entsha enamandla Snapdragon 855 Plus, I-SoC esandula ukwaziswa eza neyona Qualcomm yecandelo midlalo.
Isixhobo sasikhona kuvavanywe iveki edlulileyo nguGeekbench, kwaye apho ubukho beqonga elikhankanyiweyo elingentla laqinisekiswa, kunye neziphumo zalo kuvavanyo olusisiseko kunye nolunye oluninzi lwaziswa. Lowo ngoku uphethe ukulinganisa onke amandla alo yi-AnTuTu, Olunye uphawu lokudibanisa oludumileyo, ukongeza ekunikezelweni kwenqaku lokugqibela, liqinisekisa ezinye zeenkcukacha zobuchwephesha kunye neempawu zalo mdlalo wokudlala.
Ngokwento eboniswe luluhlu lwe-AnTuTu, iXiaomi Black Shark 2 -eyaye yabhaliswa kwindawo yogcino njenge «BlackShark DLT-A0» - Iza nescreen se-FullHD + esine-2,340 x 1,080 isisombululo sepikseli kunye nenkqubo yokusebenza ye-Android Pie efakwe ngaphambili kumzi-mveliso. Ngokubhekisele kumacandelo obuchwephesha ngakumbi, i-chipset yeQualcomm enegama, kunye ne-Adreno 640 GPU, yiyo eya kuthi ibonakalise phantsi kwe-hood yale terminal Uluhlu oluphezulu, kunye ne-12 GB yomthamo omkhulu we-RAM kunye ne-256 GB yendawo yokugcina yangaphakathi.
Xiaomi Black Shark 2 Pro kwi-AnTuTu
Amanqaku ikwazile ukubhaliswa yi-smartphone abadlali kwiqonga lokuvavanya yayiyi-405,598. Le, ubukhulu becala, yayixhaswe bubuninzi bewotshi enokuphunyezwa yi-Snapdragon 855 Plus. Khumbula ukuba le chipset ixhotyiswe nge-Kryo 485 Gold (Cortex-A76) core kwi-2.96 GHz, ezintathu ze-Kryo 485 Gold (Cortex-A76) kwi-2.42 GHz kunye ne-Kryo 485 Silver (Cortex-A55) kwi-1.8 GHz yokusebenza kwamandla . Ngaphaya koko, i-SoC ineqhayiya loyilo lwe-64-bit kunye nobungakanani bendawo ye-7nm.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IXiaomi Black Shark 2 Pro ihamba ngezandla ze-AnTuTu